Waa in la ogaadaa in Qabsashada video ah ayaa mar walba jeclaa oo ag users iyo sabab la mid ah waa barnaamij ah oo la doonayay in dadka oo waxaa mar walba sugayay. Users ayaa barnaamijkan ma aha oo kaliya isticmaalaan in ay geliyaan videos la sameeyey iyaga ay u tebiyaan warbaahinta bulshada ee caadiga ah, laakiin sidoo kale ay u hubiso in loo isticmaalaa dhowr ujeeddo kale. Tutorial Tani waa dhan oo ku saabsan barnaamijka ugu fiican video qabashada software sanadka 2015 iyo user wuxuu sidoo kale ka heli doontaa macluumaad ku saabsan barnaamijyada gabi ahaanba.
Qeybta 1: 5 Top Video Ciidamada Software 2015 daaqado
Qeybta 2: 5 Top Video Ciidamada Software 2015 u Mac
Sida daaqadaha waa OS ugu badan ee la isticmaalo adduunka oo dhan soo socda waxaa ku qoran liiska oo ka mid ah 5 barnaamijyada software sare video qabashada daaqado:
Waxaa ugu fiican iyo gobolka barnaamijyada farshaxanka oo la hubiyo in user helo kaliya ma ahan natiijada ugu fiican lakiin sidoo kale Qabsashada video la sameeyo fududahay user ee arrintan la xiriira ka. Rating guud waa weyn yahay oo waa ku waa soo dejisan in ujeedada.
2. MOV AVI video qabashada
Waxaa sidoo kale ka mid ah ciyaartoyda oo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado video Qabsashada iyo rating ee barnaamijka waxaa oo dhan ayaa sheegay in habka ugu fiican. Muuqaaladan gundhig u ah habka ugu wanaagsan ee user dhigi.
3. Wondershare video taariikhqorihii
Waa in la ogaadaa in taariikhqorihii Wondershare Video waa barnaamij keliya ayaa gundhig laftiisa gudahood gobolka video convertor tahay sidoo in la hubiyo in user helo agabka ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in URL download ku xusan waa in la raaco si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee arrintan la xiriira iyo in la hubiyo in sida ugu fiican ee la siiyo nidaamka su'aal. User waa in la ogaado in haddii Convertor Wondershare Video ah Ultimate markaas ayaa la soo bixi Video Wondershare ah oo taariikhqorihii la geliyo si toos ah. Wondershare Video convertor kama dambaysta ah ay taageertaa technology 4K iyo HD leh hawlaha tafatirka; gubanaya, duuban, diinta iyo hoorto videos ah iyadoo la kaashanayo TV noolaado. Jidka si taariikhqorihii video waa menu> video taariikhqorihii.
Sababta kaliya in barnaamijkan uu leeyahay rating hoose waxaa sabab u ahaa xaqiiqada ah in user ma aha oo kaliya ka Helayn adag tahay in la isticmaalo barnaamijka, laakiin waxa aan la horumariyo, waayo, dadka isticmaala laylis oo sidaas daraaddeed waxaa ka maqan dhammaan hawlaha muhiimka ah ee video ah Barnaamijka qabsaday. Si kastaba ha ahaatee, waa in la ogaadaa in weli barnaamijka ka shaqeeya ay aad ugu wanaagsan oo wuxuu hubiyaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka ee la xiriirta video qabashada iyo duubo in loo baahan yahay ah.
5. Camtasia video qabashada
Si aad samaysay shaqada hab fudud waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in user waa in aad u hesho barnaamijka si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay waxaa ku riyaaqay iyo user wuxuu sidoo kale uu helo shaqo lagu sameeyey qaab iyo fasalka. Si wanaagsan u isticmaasho barnaamijka waxaa sidoo kale lagula talinayaa in ay ka soo dejisan ku Hanuuniyaa ee la heli karo online si fiican loo fahmo iyo in ay ku raaxaystaan ​​muuqaalada ah in aan la heli karin meelo kale.
Waa in la ogaadaa in marka laga reebo daaqadaha Mac sidoo kale waa mid ka mid ah OS ugu isticmaalay adduunka iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in video ah qabashada ugu wanaagsan ee aan ku rakiban kaliya sameeyo laakiin faa'iideysan sidoo . Qaybtani waxay ka hadlaya barnaamijyada sare qabashada 5 video for Mac.
Waa barnaamij ah oo uu suuqa qaaday duufaanka iyo hubiyaa in muuqaalada ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u isticmaala kuwaas oo doonaya in la hubiyo in waayo-aragnimo video qabashada badan Mac weli ugu fiican iyo gobolka of farshaxanka. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican waa in sidoo kale lagu xusay in user waa inay hubiyaan in hage ugu fiican in sidoo kale waxaa laga heli karaa in ka badan URL ee kor ku xusan waxaa lagu soo bixi, si xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira iyo user helo ugu wanaagsan iyo state of habka farshaxanka ee video qabashada fudayd ka.
2. ciyaaryahan markii Quick
Waa ciyaaryahanka si rasmi ah ayaa waxaa bilowday Apple Inc. iyo si fudud looga bixi karaa. Rating sare muujinaysa in dadka isticmaala ma aha oo kaliya ku faraxsanahay functionalities, laakiin sidoo kale doonayaa in la hubiyo in ugu fiican ayaa loo dhiibay iyo Apple Inc. hubaal hayaa yabooha waxa ay ka dhigaysaa in dadka isticmaala oo waa sabab ka mid ah in Ciyaaryahanka waa waajib rakibo kaga badiyeen Mac.
Maaddaama ay gobolka ka mid ah qaababka farshaxan iyo qaab-dhismeedka guud oo uu soo gundhig convertor this users ah ayaa lagu qiimeeyo sare iyo shaki la'aan waa barnaamij software ugu fiican video qabashada liiska gudahood. Muuqaaladan iyo hababka waa kuwa ugu fiican oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican iyo kan gobolka ee barnaamijka fanka kaliya ee lagu raaxaysan karaa haddii Hanuuniyaa in waxa laga heli karaa URL ku xusan la akhriyi oo la fahamsan yahay.
4. record Screen Robot Lite
Si aad u hesho sida ugu fiican ee ka mid ah waayo-aragnimo video qabashada marka la eego dadka isticmaala sare waa in la ogaadaa in dadka isticmaala ay tahay in ay hubiso in barnaamijka la soo bixi si loo hubiyo in user helo natiijooyinka ugu fiican iyo habka guud noqonayaa siman oo si fudud u samayn habka ugu fiican. User waa in sidoo kale la hubiyo in barnaamijka waxaa loo isticmaalaa sida tilmaamaha in ay la kulmaan ugu fiican.
Qalabkani waxa uu ka dhigayaa qabashada video sahlan oo fudud oo weliba hubinayaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah hawlaha farshaxanka in ay yihiin kuwa ugu fiican oo ay gundhig sidan oo kale taas oo ka dhigaysa video ku qoro fudud oo fudud ah. Barnaamijka waxaa ugu fiican in la hubiyo in user helo tayada wax soo saarka wanaagsan ee sidoo kale.
Sida loo Beddelaan PowerPoint in AVI Video
> Resource > Video > Top 10 Video fiican ee Ciidamada Software 2015 u Win / Mac